Ikhaya elihle eMariapfarr elinamakamelo okulala ama-4
Ikhaya lamaholide elinefenisha yothando endaweni yentaba yaseSalzburg linikeza indawo eningi futhi lilungele imindeni nabangane. Amahora okuphumula elanga engadini enhle enezoso ehlobo noma ukufudumala ubusika ngemva kokushushuluza eziko noma kukhabhinethi ye-infrared futhi. Lapha, wonke umuntu uthola indawo yakhe ayintandokazi.
ezinyangeni zasehlobo u-Mariapfarr unikeza inqwaba yohambo lokuqwala intaba olujabulisayo ku-"Lungauer Sunnseit'n" ukusuka e-Fanningberg ukuya e-Schladming Tauern.
Okuvelayo okuningi kwe-Winterstimmung kuthwebula i-snowshoeing, ukugibela isileyi, i-sledding noma uhambo lokushushuluza eqhweni. Abashushuluzi bafika ku-6 km Fanningerberg ngezindleko zakho.
Ayilungele amaqembu entsha
Ikhaya lamaholide elinefenisha yothando endaweni yentaba yaseSalzburg linikeza indawo eningi futhi lilungele imindeni nabangane. Amahora okuphumula elanga engadini enhle enezoso ehlobo noma ukufudumala ubusika ngemva kokushushuluza eziko noma kukhabhinethi ye-infrared futhi. Lapha, wonke umuntu uthola indawo yakhe ayintandokazi. ezinyangeni zasehlobo u-Mariapfarr unikeza inqwaba yohambo lokuqwala intaba olujabulisayo ku-"Lungauer Sunnseit'n" kusukela e-Fanningberg ukuya e-Schladming Tauern. Okuningi okuvelayo nge-Winterstimmung kuthathwe ukubethelwa eqhweni, ukugibela isileyi, isiledi noma uhambo lokushushuluza eqhweni. Abashushuluzi bafika ku-6 km Fanningerberg ngezindleko zakho.
Amabanga: indawo yokuhlala eseduze 100 m / ithuba lokudoba 5 km / ukuthenga 500 m / Amanye amanzi noma indawo yokubhukuda. (Ichibi) 12 km / indawo yokudlela 400 m / idolobha eliseduze(Tamsweg) 7 km / ibhasi lokushushuluza 200 m / skilift 6 km / ukushushuluza indawo yezemidlalo (Fanningberg) 6 km / amanzi (Idamu lokubhukuda elivulekile) 400 m / ukushushuluza izwe elinqamula izwe 5 km